Dubai Medical College - Tadisha Medicine e Dubai. MBBS e-UAE
Dubai Medical College Yokuxhumana
isifinyezo : DMC
Wasekelwa : 1985
abafundi (ngu.) : 2000
Ungakhohlwa xoxa Dubai Medical College
Bhalisa at Dubai Medical College
Dubai Medical College (DMC) uzibophezele ekuhlinzekeni abafundi imfundo yezokwelapha ukuthola iziqu accredited ka Bachelor in Okwelapha Nokuhlinza e-UAE. I ekolishi iyoletha Injongo yayo ngokunikeza imvelo yokufunda, kokubili ngaphakathi nangaphandle ekilasini esisekela amagugu Islamic futhi ikhuthaza amazinga aphezulu umfundi ophumelele, ehambisana eziphakeme excellence.To academic ukukhonza umphakathi wethu by ukunothisa odokotela abanekhono futhi enekhono kanye bayaqhubeka ngcono izindlela zokufunda, okwenza DMC kwesinye sezikole zezokwelapha ehola emhlabeni.
Ukuzimisela ukwenza izenzo zokukhulekela ngesikhathi esifanele, okungcono nanjengebandla;
Ukuphishekela wolwazi umsebenzi ethelayo, ngaphandle kokulinda Siyababonga kwabanye, ngaphansi inkolelo ukuthi Allah yedwa ujezisa noma imivuzo njengoba intando yakhe.
Elandela Ikhodi Islamic sigqoka.
Ukwenza duty komuntu ngaphansi nokuqiniseka ukuthi Allah uqondisa zonke izenzo zethu;
Eqaphela ukubaluleka isikhathi nokugcina isikhathi kukho kula makilasi okufunda ukufunda, njll esiwusizo.
Ukulondoloza ngesizotha nangokuhluzeka okubhekwa in Gait, ngokugcina ongaphakeme izwi ngenkathi ekhuluma , egqoke ukumamatheka nangokwenama okukhulu obuhle lapho bebhekene nenkinga, nokugwema ukuhleka elikhulu kwezimo ezihlukahlukene sulky;
Esibekezelela ezifundweni kanye emsebenzini;
Ukuba qotho komuntu yedwa kanye nabanye;
Ukwenza negalelo elihle izingxoxo academic nokwelula ukubambisana komuntu ozakwabo kuzo zonke izimo futhi izimo;
Ukulondoloza Ukucoceka of indawo kanye lokukhuthaza abanye ukuba abakuyo.
Ukusenza umkhuba umphefumulo efuna kulo lonke komuntu bezenzo futhi ngaso sonke isikhathi sinombono (kokuhlola konke okubi futhi saqondisa indlela oyiphutha, uma kunesidingo) ugweme sezenzo okungalungile.
Wakubona kahle ukuthobeka imikhuba nokugwema nokuqhosha bamanga.
Njalo amantombazane amabili ukwakha ubuhlobo nobudadewethu nomunye abaqhuba ukubambisana ezifundweni, zokunqoba izinkinga zabo ndawonye futhi ukuhlola inkumbulo nomunye, uma kunesidingo. Ngaphandle, abafundi nazo zihlukaniswe ngamaqembu nelungu abasebenzi yokufundisa njengenhloko yayo. Inhloso ngemuva lo msebenzi ukukhuthazwa umoya wokuncintisana phakathi abafundi kanye kudalwa kwaba nomoya omuhle wokuthanda academic abafundi.
yezemithi & Toxicology
Uyafuna xoxa Dubai Medical College ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Dubai Medical College kumephu
Dubai Medical College Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa Dubai Medical College.